Nantsi indlela I-Fave yakho yase-Afrika ebulewe ngayo Kule Mpelaveki iphelileyo
Ukusuka eNaija ukuya e-SA, Nantsi indlela I-Fave yakho yase-Afrika Ebulewe Ngayo Kule Veki iVileyo
LIyonyani, ubudlelwane bethu nemfashini bunento yokwenza abadumileyo; izinto abazithengayo kunye nendlela abazenza ngayo iincinci zemfashini zonke zisebenza njengokhuthazo kuninzi lwethu. Ewe kunjalo, asinakuba nakho ukuhlawula ezinye zeengceba zase-Afrika ezinxiba ngenxa yokuba zisekupheleni, kodwa loo nto ayikuthinteli ekuzuleni ngenxa yoko kufane- amantombazana afanelekileyo, anobulumko.
Le mpela veki yayixakekile njengoko zazikho zonke iindidi zemisebenzi yezolonwabo eyenzeka kwizixeko ezikhulu kwiAfrika iphela-ukusuka eLagos ukuya eJo'burg. Njengakwimisitho yezoluntu ulindele ukuba ii-celebs zakho zase-Afrika ziphume ziphume kwaye babeqinisekile ukuba benze njalo! Isuka kwi-Queen B yoMzantsi Afrika, UBonang Matheba kwintombazana ye-TV yaseNigeria UStephanie Coker, Iinkwenkwezi zesitayile saseAfrika ziphuma zisebenzela isitayile esithile kule mpelaveki.
Nantsi into ekufuneka uyijongile kwi-celebs yakho yase-Afrika kule veki iphelileyo…
UBonang Matheba lincinci uOl 'uMnumzana oLanga kwilanga lelene ezimbini
UStephanie Coker-Aderinokun uhlonipha imbali yomculo uSade Adu
I-Omowunmi Onalaja yayilungele ukoyisa intshukumo kule nombolo yefreyiti
Ini Dima-Okojie Wenza eyakhe imithetho kule ensemble ehlelwe
Ayanda Thabethe 'ngumntwana opholileyo' ongenakuxolisa ngokuqaqamba
UMihlali Ndamase's izisa imbono yeParisian yesitayile kwizitrato zoMzantsi Afrika
Isitayile sefashoni yosaziwayo baseAfrika isitayile sosaziwayo Abantu abadumileyo base-Afrika Ayanda Thabethe ayanda thabethe UBonang Matheba Jonga matheba isitayile Uhlobo lomntu Ukuphefumlelwa kweSitayile soSaziwayo Izitayile zooSaziwayo Okufumaneka Ini Dima-Okojie Abafazi abasandula ukunxiba UMihlali Ndamase isitayela esaziwayo isitayile sefashoni yaseNigeria Iindaba zomntu waseNigeria oosaziwayo namhlanje isitayile saseNigeria Isitayile sosaziwayo seNollwood I-Omowunmi Onalaja isitayile sosaziwayo sase-afrika UStephanie Coker Aderinokun Isinxibo sabafazi womenswear
UJessica Agorye Aprili 10, 2018